Wararka - Farqi ayaa kujira Suuqa korantada ee Graphite, Qaabka Naqshadaynta Gaabanna wuu sii socon doonaa
Suuqa koronto-garaafka garaafka, oo hoos u dhacay sanadkii hore, ayaa dib-u-dhac weyn ku sameeyay sannadkan.
Qeybtii hore ee sanadka, korantadayada garaafka ayaa asal ahaan gabaabsi ahaa. ” Maaddaama farqiga suuqa ee sannadkan uu ku saabsan yahay 100,000 tan, waxaa la filayaa in xiriirkan adag ee u dhexeeya sahayda iyo baahida uu sii socon doono.
Waxaa la fahansan yahay in ilaa bishii Janaayo ee sanadkaan, qiimaha koronto garaafka uu si isdaba joog ah kor ugu kacayay, laga bilaabo ilaa 18,000 yuan / tan bilawgii sanadka ilaa 64,000 yuan / ton hada, iyadoo kororka 256%. Isla mar ahaantaana, coke coke, oo ah maaddada ceyriinka ugu muhiimsan ee koronto garaafka, ayaa noqotay mid gabaabsi ah, qiimihiisuna wuu sii kordhayay jidka oo dhan, kaasoo kordhay in ka badan 300% marka la barbar dhigo bilowga sanadka.
Baahida loo qabo shirkadaha biraha ka hooseeya ayaa xoog badan
Koronto Graphite waxaa inta badan ka samaysan coke batrool iyo irbadaha coke sida alaabta ceeriin iyo dhuxusha daamur ahaan sida guntin, oo inta badan waxaa loo isticmaalaa foornada steel steel arkin, foornada qaansoleyda foornada, foornada iska caabin ah, iwm. 80% wadarta isticmaalka koronto garaafka.
Sannadkii 2016, hoos u dhaca ku yimid EAF steelmaking, waxtarka guud ee shirkadaha kaarboonku wuu yaraaday. Sida laga soo xigtay tirakoobyada, wadarta iibka mugga korantada garaafyada ee Shiinaha ayaa hoos u dhacay 4.59% sanad-sannadeedka 2016, wadarta khasaaraha ka dhashay tobanka shirkadood ee koronto-garaafka ugu sarreeya waxay ahaayeen 222 milyan yuan. Shirkad kasta oo kaarboon ah waxay la dagaallameysaa dagaal qiima leh si ay u ilaaliso saamigeeda suuqa, qiimaha iibka ee koronto garaafku aad ayuu uga hooseeyaa qiimaha.
Xaaladdan ayaa dib loo rogay sannadkan. Iyada oo ay sii qoto dheer tahay dib-u-habeynta alaabada, warshadaha birta iyo birta ayaa sii wadaya soo qaadashadooda, iyo "birta birta ah" iyo foornooyinka soo noqnoqda ee dhexdhexaadka ah ayaa si fiican loo nadiifiyay oo loo saxay meelo kala duwan, baahida loo qabo foornooyinka korontada ku shaqeeya ee shirkadaha birta ayaa kordhay si xoog leh, sidaas awgeed wadida baahida korantada garaafka, iyadoo lagu qiyaaso baahida sanadlaha ah ee 600,000 tan.
Waqtigan xaadirka ah, waxaa jira in ka badan 40 shirkadood oo leh karti wax soo saar koronto garaaf leh oo ka badan 10,000 tan oo Shiinaha ah, wadar ahaan wax soo saarkeeduna yahay 1.1 milyan oo tan. Si kastaba ha noqotee, saameynta kormeerayaasha ilaalinta deegaanka ee sanadkan, shirkadaha wax soo saarka koronto garaafka ee gobollada Hebei, Shandong iyo gobollada Henan waxay ku jiraan xaalad wax soo saar xaddidan iyo ganaax wax soo saar, iyo soosaarka korantada sanadlaha ah ee garaafta ayaa lagu qiyaasaa inuu yahay ilaa 500,000 tan.
Farqiga suuqa ee qiyaastii 100,000 tan laguma xallin karo shirkadaha kordhinaya awooda wax soo saar. ” Ning Qingcai wuxuu sheegay in wareegga wax soo saarka ee walxaha korantada garaafku guud ahaan ay ka badan yihiin laba ama saddex bilood, iyo wareegga wax lagu kaydiyo, way adag tahay in la kordhiyo mugga muddada gaaban.
Shirkadaha kaarboonku waxay yareeyeen wax soo saarkoodii wayna xireen, laakiin baahida shirkadaha birta ayaa sii kordhaya, taas oo horseedaysa koronto garaafka oo noqota badeecad ciriiri ah oo suuqa dhexdeeda ah, sicirkeeduna uu kor ugu sii kacayay ilaa iyo maanta. Waqtigan xaadirka ah, sicirka suuqa ayaa kordhay 2.5 jeer marka loo eego bishii Janaayo ee sanadkan. Shirkadaha birta qaarkood waa inay horay usii bixiyaan si ay alaabta u helaan.
Sida laga soo xigtay dadka ka faalooda arrimaha warshadaha, marka la barbar dhigo foornada qaraxa, birta foornada korontada ku jirta waa mid tamar badan-badbaadinaysa, deegaanka u roon oo kaarboon yar. Iyadoo Shiinaha ay soo geleyso wareegga qiimo dhaca, birta foornada korontada waxay gaari doontaa horumar weyn. Waxaa lagu qiyaasaa in saamigeeda wadarta soosaarka birta laga filayo inay ka kororto 6% sanadka 2016 ilaa 30% sanadka 2030, iyo baahida loo qabo koronto garaafyada ayaa wali weyn mustaqbalka.
Kordhinta qiimaha alaabada ceeriin ee kor u kacda ma dhimayso
Korodhka qiimaha koronto-garaafka ayaa si dhakhso leh loogu gudbiyay dhinaca silsiladda warshadaha. Tan iyo bilowgii sanadkan, qiimaha alaabta ceyriinka ah ee ugu muhiimsan ee wax soo saarka kaarboon, sida coke batroolka, dhuxusha daaqda dhuxusha, coke calcined iyo cirbadda coke, ayaa si isdaba joog ah kor ugu kacay, celcelis ahaan koror ka badan 100%.
Madaxa waaxdayada wax iibsiga ayaa ku tilmaamay "mid sii kordheysa". Sida laga soo xigtay qofka masuulka ka ah, iyada oo ku saleysan xoojinta xukunka suuqa, shirkadu waxay qaadatay talaabooyin ay ka mid yihiin wax ku iibsiga qiimo jaban iyo kordhinta alaabada si ay ula qabsato kororka sicirka una hubiso wax soo saarka, laakiin kor u kaca ba'an ee alaabta ceeriin ayaa ah aad uga fog filashooyinka.
Waxyaabaha ceyriinka ah ee sii kordhaya, cirbadda coke, oo ah maaddada ceyriinka ugu weyn ee koronto garaafka, waxay leedahay kororka ugu weyn, iyadoo qiimaha ugu sarreeya uu kordhayo 67% hal maalin iyo in kabadan 300% sannad badhkiis. Waa la ogyahay in coke coke uu xisaabtamo in kabadan 70% wadarta kharashka koronto garaafka, iyo alaabta ceyriinka ah ee korantada korantada aadka u sareysa waxay gebi ahaanba ka kooban tahay coke cirbadeysan, oo cunaysa 1.05 tan halkii tan oo garaaf garaade ah koronto
Cirbadda cirbadda ayaa sidoo kale loo isticmaali karaa baytariyada lithium, awoodda nukliyeerka, aerospace iyo meelaha kale. Waa badeecad yar oo ka jirta gudaha iyo dibadda, intabadanna waxay kuxirantahay waxyaabaha laga keeno Shiinaha, qiimihiisuna wali wuu sarreeyaa. Si loo hubiyo wax soo saarka, shirkadaha koronto-garaafka garaafka ayaa midba midka kale ka dambeeyay, taas oo horseedday koror joogto ah oo sicirka coke-ka.
Waxaa la fahansan yahay inay jiraan shirkado yar oo soo saara coke cirbadda gudaha Shiinaha, dadka ku nool warshadaha waxay aaminsan yihiin in kororka sicirka uu u muuqdo inuu yahay codka guud. In kasta oo faa'iidada qaar ka mid ah soosaarayaasha alaabta ceyriin ay si weyn u soo hagaagtay, haddana halista suuqa iyo kharashyada hawlgalka ee shirkadaha kaarboon ka hooseeya way sii kordhayaan.